May202021 by adminNo Comments
बढ्यो आज डलरको भाउ, अन्य देशको मुद्राको भाउ कति पुग्यो ? हेर्नु`होस्
Posted in अर्थ/वाणिज्य
बिहीबार (जेठ ६) एक अमेरीकी डल`रको खरिद|दर ११६.७७ रुपैयाँ र बिक्रि`दर ११७.३७ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, एक युरोको खरिद|दर १४२.५६ रुपैयाँ र बिक्रि|दर १४३.३० रुपैयाँ रहे`को छ । यस्तै जापानीज १० यनको खरिद`दर १०.६९ रुपैयाँ र बिक्रिदर १०.७५ रुपैयाँ भएको छ । यता, कतारियन एक रिया`लको खरिददर ३२.०६ रुपैयाँ र बिक्रिदर ३२.२३ रुपैयाँ छ । दक्षिण कोरि|यन १०० वनको खरिददर १०.३३ रुपैयाँ र बिक्रिदर १०.३९ रुपैयाँ रहेको छ ।कुवे`तियन एक दिना`रको खरिद`दर ३८८.३३ रुपैयाँ र बिक्रिदर ३९०.३२ रुपैयाँ रहेको छ । बहराइन एक दिनारको खरि|ददर ३०९.७३ रुपैयाँ र बिक्रिदर ३११.३३ रुपैयाँ रहेको छ ।
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले आइपिओ जारी गर्ने, कहिले कति कित्ता जारी गर्दैछ त ? थाहा पाउनुहोस्
Posted in अर्थ/वाणिज्य, समाचार
नेष्डो समृद्ध लघु`वित्त वित्तीय संस्थाले आइ`पीओ जारी गर्ने भएको छ । सोको लागि कम्पनीले ग्लोबल आइ`एमई क्यापिटल`लाई निष्का`सन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । नेष्डोले ८ लाख २८ हजार ७ सय ५० कित्ता आइपीओ जारी गर्दैछ । नेष्डो र ग्लोबल आइएम|ई क्यापिटल|बीच सेयर निष्का|सन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा लघु`वित्तको तर्फबाट कार्य`कारी अध्यक्ष विश्व प्रकाश प्रसाई र क्यापि`टलको तर्फबाट प्रमुख कार्य|कारी अधिकृत पारस मणि ढकालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेष्डो समृद्धको केन्द्रीय कार्या`लय पर्वत जिल्ला|को कुश्मा बजारमा छ । यसको अधि`कृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले जारी पुँजीको ३०% सेयर सर्व`साधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो । तर धितो|पत्र बोर्डमा निवेदन दिएर बोर्डको अनु|मति पाएपछि मात्र आइपीओ निष्काशन हुनेछ । - रातोपाटी
सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नु`होस्
आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । शुक्रबार तोलाको ९१ हजार ६ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा ९ सय रुपैयाले बढेर तोलाको ९२ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यव`सायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँमा का`रोबार भइरहेको थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेर तोलाको १ हजार ३ सय ५० रुपैयामा कारोबार भइरहे`को महासंघले जनाएको छ । हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंक एकापसमा गाभिँदै नेपाल राष्ट्र बंैकको विलय तथा प्राप्ति (मर्जर एण्ड एक्वीजिसन) नीतिअनुसार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटे र हिमा|लयन बैंक लिमिटेडबीच एकआपसमा गाभ्ने गाभिने`सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै देशका यी ठूला वाणिज्य बैंक एकापसमा गभिने भएका छन् । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सबल तथा सक्षम बनाउने उद्देश्य`का साथ उक्त स
आज सुनचाँदीको भाउ कति छ ? हेर्नुहोस्
लामो समयदेखि लगा'तार उकालो लागेको सुनको मूल्य पछिल्लो समय क्रमिक रुपमा घट्न थालेको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन बिक्री हुन थालेप'छि मूल्य घट्न गएको महासंघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको बिक्री ह्वात्तै बढेकाले डेढ महिनामा तोलामा १० हजार रुपैयाँ घटेको हो । पछिल्लो समय सुन बिक्री गर्ने धेरै भएकाले मूल्य क्रमिक रुपमा गिरावट आएका'ले आगामी दिनमा अझै घट्ने देखिएको शाक्यले जानकारी दिए । बिहीबार सु'नको भाउ स्थिर रहेको छ । बुधबार सुन ९४ हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो । आइतबार ८ सय रुपैयाँले बढेर ९५ हजार ६०० मा कारोबार भएको सुन सो'मबार स्थिर रहेको भएप'नि मंगलबार भने ५ सयले घटे'को थियो । मंगलबार ९५ हजार १ सयमा कारोबार भएको सुन बुध'बार ९४ हजार ५ सयमा कारो'बार भएको थियो । आज विहि'बार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महा'संघले जनाए अनुसार त
बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशको मुद्राको भाउ पनि बढ्यो
नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमे'रिक डल'रको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको नि'र्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारो'बारको सुपरि'वेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । विनि'मय दर भन्ना'ले एउटा मुद्राको अर्को मुद्रामा वि'नियम गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बुझाउँदछ । दुई मुद्रा वि'चको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रा'लाई अर्को मुद्रामा साट्नको लागी प्रयोग गरिने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ । उदाहरण'को लागी नेपालमा अमेरिक डल'को विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । ने:पालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको नि'र्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारो'बारको सुपरि'वेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक” ले गर्दछ । विश्वमा अहिले कोरोना भ
बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशको मुद्राको भाउ पनि हेर्नुहोस्
नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमे'रिक डल'रको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको नि'र्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारो'बारको सुपरि'वेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । विनि'मय दर भन्ना'ले एउटा मुद्राको अर्को मुद्रामा वि'नियम गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बुझाउँदछ । दुई मुद्रा वि'चको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रा'लाई अर्को मुद्रामा साट्नको लागी प्रयोग गरिने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ । उदाहरण'को लागी नेपालमा अमेरिक डल'को विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । ने:पालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको नि'र्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारो'बारको सुपरि'वेक्षण “ नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । आज अमे
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ? हेर्नुहोस्..
पछिल्ला केही दिन'यता नेपाली बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य'मा लगातार गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबारदे'खि सुनको भाउ निरन्तर ओरा'लो लागेको छ । सोमबार प्रतितोला रु ९७ हजार २०० मा कारो'बार भएको छापावाला सुनको मूल्य मङ्गल'बार प्रति'तोला रु एक हजार ७००, बुधबार रु एक हजार २०० र आज प्रति'तोला रु एक हजार २०० ले घटेको छ । महासङ्घले आजका लागि छापा'वाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९३ हजार १०० र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९२ हजार ६०० तोकेको छ । बुधबार छापा'वाला सुनको मूल्य प्रति'तोला रु ९४ हजार ३०० र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९३ हजार ८०० कायम भ'एको थियो । यस्तै बिही'बार चाँदीको मूल्यमा पनि प्रति'तोला रु ७० ले गिरावट आएको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रति'तोला रु एक हजार १२० तोकि'एको छ।रासस
Sep172020 by adminNo Comments
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नु’होस्..
नेपाली बजारमा बिहि'बार सुनको मुल्य घटेको छ । बुध'बार तोलामा ९७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारो'बार भएको छापा'वाल सुन बिहीबार ९००रुपैयाँले घटेर तोलामा ९६ हजार ६०० रुपैयाँ'मा कारो'बार भएको नेपाल सुन'चाँदी व्यव'सायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजा'वी सुन तोलामा ९६ हजार १०० रुपैयाँमा कारो'बार भएको छ । त्यस्तै'गरी आज चाँदी'को मूल्य पनि घटेको छ । आज चाँदीको मुल्य तोला'मा १३४० रुपैयाँ'मा कारो'बार भएको महा'संघले जनाए'को छ ।
आज सुनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नुहोस्…
आज सुनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नुहोस्..... आज सुन चाँदीको मूल्य स्थिर छ । मंगल'बार सुन प्रतितोला ६ सयले बढेको थियो । आइत'बार स्थिर रहेको सुन'को मूल्य सोमबार ९६ हजार ९ सय कायम भएको थियो । मंगलबार ९७ हजार ५०० मा कारो'बार भएको' सुन आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुन'चाँदी व्यव'सायी महा'संघका अनुसार आज तेजावी सुनको मूल्य ९७ हजार छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य आज प्रति'तोला १,३४० कायम रहेको महा'संघले जनाएको छ ।
बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशको मुद्राको भाउ यस्तो छ
नेपाल राष्ट्र बैंक'ले बुध'बार (भदौ ३१) मा जारी गरेको विनि'मयदरका अनुसार अमे'रिकी डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री'दर ११८ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । यस्तै, युरो एकको खरिद'दर १३९ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्री'दर १४० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाए'को छ । यसैगरी, पाउण्ड एक'को खरिद'दर १५१ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ । यसै'गरी, मले'सियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री'दर २८ रुपैयाँ ५९ पैसा र'हेको छ। यता, कतारी रियाल एकको खरिद'दर ३२ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्री'दर ३२ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ । र, युएई दिराम एक'को खरिद'दर ३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ । तालिकामा हेर्नुहोस्..
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (107728)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (104932)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (89965)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (85422)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (82626)
फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको यो डान्स (हे`र्नुहोस् भिडियो) (79555)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (74544)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (69715)
स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (69441)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (68480)
करीब ३ खर्ब रुपैयाँका मालिकले बिहे गर्न केटीनै नपाएपछि…
अनिता आइसियुमा जाँदै गर्दा छोरिले यसरी आमासग लुटुपुटु गरिन् (हेर्नुस् आँखा रसाउने भिडियो )
युवतीले परिक्षामा नम्बर बढाई मागिन्, टिचरले राखे यस्ते प्रस्ताव ! सुनेर छात्रा परिन् चकित
मुकुन्द घिमिरे ‘मुकुन्दे’ले गरे इन्दिरासंग इन्गेजमेन्ट
कठै! छोरोको शरीरनै कुहिएर झर्दै छ,आमा रुदै सहयोगको लागि हात फैलाउदै… (भिडियो हे’र्नुस् )